I-FAQs -Iris yobuhle Co., Ltd.
A: Singabenzi bokwenza izithambiso.
2.Q: Ndingayifumana njani isampulu ukujonga umgangatho wakho?
A: Okokuqala, masixelele imfuneko sakho malunga nezinto, ngoko siya kunika ingcebiso ngokufanelekileyo kwaye unike locaphulo. Nje ukuba zonke iinkcukacha ziqinisekise ukuba zingathumela iisampulu. Iindleko zesampulu ziya kubuyiselwa ukuba i-odolo ibekiwe.
3.Q: Ngaba uyayamkela i-OEM ODM kwaye ungayenza uyilo kuthi?
4.Q: Ndingalindela ixesha elingakanani ukufumana isampuli?
5.Q: Kuthekani ngexesha lokukhokelela kwimveliso yobuninzi?
A: Ukunyaniseka, kuxhomekeke kubungakanani be-odolo kunye nexesha obeka ngalo iodolo. Ngokwesiqhelo iya kuba ziintsuku ezingama-25-60. Singumzi-mveliso kwaye sinemveliso eyomeleleyo yokuhamba, sicebisa ukuba uqale ngokubuza iinyanga ezimbini phambi komhla ongathanda ukufumana iimveliso kwilizwe lakho.
6.Q: Athini amagama akho okuhlawula?
Silapha ukukunceda --- nceda ukhululeke ukusithumela i-imeyile irisbecosmetics@gmail.com.